Kulan looga hadlayay doorka dhalinyarada Soomaaliyed ee Nabada oo lagu qabtay Nairobi – idalenews.com
Kulan looga hadlayey Doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ee nabada iyo wada noolaanshaha, iyo is dhex galka bulshada ee qowmiyadaha kale ee ku dhaqan dalka Kenya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Kulankan oo uu soo qaban qaabiyay Ururka u dooda xuquuqda dhalinyarada ee SYAO ayaa waxaa ka qeyb galay ilaa 200-dhalinyaro oo ka kala yimid qeybaha Xaafada Islii, Gudiga Ganacsatada, Mas’uuliyiin ka socotay Safaarada Soomaaliya ee dalka Kenya iyo Xubno ka tirsan Barlamaanka.
Gudoomiyaha Ururka u dooda xuquuqda dhalinyarada ee SYAO Maxamed Ibraahim Cali Cajiib oo furan ayaa sheegay in kulankan uu muhimad gaar ah u leeyahay Soomaalida Islii oo waayadi dambe ku jiray xaalado aan xasilooneyn iyo nabadgalyo xumo , wuxuuna sheegay in arimahas looga bixi karo iyadoo gacmaha la is qabsada oo loo midoobo Kenya iyo Soomaalidaba qaswadayaasha , dhalinyaradana la siiyo wacyigalino dheeraad ah .
Mr Cajiib ayaa balanqaaday in SYAO ay qaban doonto tartan ciyaareed wacyi galineed oo fududeyn doona in dhalinyarada nabada iyo degenaanta qaataan hiwaaydna ka dhigtaan waxbarashada iyo tartamada isboorti , waxaana uu balan qaaday in wada shaqeynta dhinacyada bulshada lagu gaari doono yoolka saxda ah.
Dr C/raxmaan Baadiyo oo isna madasha ka hadlay ayaa tibaaxay in waxbarashada ay leedahay muhimada wacyigalinta isagoo ku dheeraaday in dhalinta Soomaalida dhibaatada heysataa ay tahay waxbarasho la’aan .
Qunsulka safaarada Soomaalida ee Kenya Mr Siyaad Shire ayaa dhinaciisa mar uu ka hadlayey munaaasabada waxaa uu u mahad celiyey doorka aan kala go’a laheyn ee SYAO mar walba , wuxuuna dhalinta ugu baaqay inay nabada waligood ka shaqeeyaan, isagoo tilmaamay in ka safaarada ahaan in dawladda Kenya ay kala hadleen arimaha Soomaalida Kenya
“Kenya cidna kuma gardarooneyso anagana waxaa nalaga rabaa waa nala marti galiyee inaan nabada dalkooda kala shaqeyno” ayuu yiri Qunsulka.
Xuseen Aar oo isna ah gudoomiye ku xigeenka gudiga ganacsatada Soomaalida ayaa farta ku fiiqay in dhalinta Soomaalida markii ay Kenya imaadeen halki laga rabay iney wax bartaan ay ku biireen kooxo dhibaato geysta , waxuu ku booriyey dhalintarada wanaag iyo nanad.
Kulanka ayaa ah kii u horeeyey ee nuucisa ah ee loo qabto dhalinyarada Islii tan iyo markii Xaafada Islii ka dhaceen falalka amni daro ee kooxaha qaswadayaasha ka wadaan dalka Kenya.